Qaybaha yaryar ee u horseedi doona muuqaal muuqaal ah dayrtaan | Ragga Stylish
Miguel Serrano | | fashion, Isbeddellada
In kasta oo xaqiiqda ay tahay in moodku marayo marxalad lagu calaamadeeyay falsafadda "in badan ayaa badan", weli waxaa jira meelo badan oo loogu talagalay qaybaha yaryar.
Hadaad jeceshahay layman nadiif ah, freshness, iyo shaqeynaya, waxaan kugu dhiirinaynaa inaad tixgeliso waxyaabaha soo socda cusub ee deyrta / jiilaalka 2017-2018:
1 2-in-1 baarkinka
2 Daboolka dhogorta
4 Shaati la jeexjeexay
5 Adidas Asal Ahaan
Dabool la'aan iyo jeebado ka badan kuwa sida adag loo baahan yahay. Shirkada Mareykanku waxay yareyneysaa jardiinadan buluuga ah ee buluuga ah sida ugu yar. Nooc la safeeyey oo sifiican loogu rakibay jaakadan caadiga ah ee illaa munaasabad kasta.
Guud ahaan, naqshadaha yar-yar waxay siiyaan koofiyado kala duwanaansho badan. Waxaad ku dari kartaa gabalkan cawliga ah ee dhogorta leh muuqaal caadi ah iyo mid caqli leh si aad uhesho taabasho cusub iyo mid casri ah.
Muddooyinkii dambe, dhididka qaabaysan ama midab dhalaalaya ayaa dejinaya codka, laakiin Acne Studios waxay u socotaa madow cad. Xitaa waxay ka siibtaa dharka jeebabka u eg kangaroo. Natiijadu waxay tahay hoodie muuqaal ah oo fudud.
Shaati la jeexjeexay
In kasta oo ay u egtahay in lala xiriiriyo midabbo adag, qaababka qaarkood iyo ujeeddooyinka ayaa sidoo kale naga caawin kara inaan siino lahjad ugu yar muuqaalkeenna. Taasi waa kiiska maaliyaddan ka socota shirkadda Isbaanishka ee Zara, oo isku darsanta jaritaan aad u deggan oo leh labalaabyo dhuuban oo dhuuban.
Adidas Asal Ahaan
Mr Porter, 180 XNUMX
Isku darka qaabab kala duwan ayaa sidoo kale keeni kara gabal aad u yar, gaar ahaan marka la doorto isticmaalka hal midab, sida ay muujisay Adidas Original AF 1.4. In kasta oo nashqadeeyayaasha isboortiga ay hadda fiirinayaan dhanka quruxda iyo naqshadaha adag ee 80s iyo 90-meeyadii, Moodooyinka mustaqbalka sida kuwan oo kale waxay u taagan yihiin sidii sharad adag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Shan qaybood oo aad uyar si aad uqaadatid qaabkaaga hada
Farfetch wuxuu noo keenayaa dharka cusub ee ragga ee Stella McCartney